एक जंगल यात्रा मा जानुहोस् जंगल आत्मा: जंगली को कल स्लट. यो जंगल भित्र गहिरो, यो नम छ, आर्द्र र धेरै खतरनाक जनावर र intimidating ध्वनि को घर. यो mobileslots NetEnt देखि एक पाँच रील छ र 243 स्लट जीत तरिका.
यो mobileslots NetEnt विकास छ. कम्पनी मात्र Entertaining छैन भनेर खेल सिर्जना गरिएको छ तर पनि उज्ज्वल ग्राफिक्स र नवीन सुविधाहरू आउन.
पाँच रील र 243 गर्न 1,024 स्लट जीत तरिका, यो mobileslots सबै उपकरणहरूमा 20p देखि नाटक छ 100 स्पिन गर्न. जहाँ जंगली प्रकृति जीवित आउँछ उत्कृष्ट 3D ग्राफिक्स एक जंगल मा सेट. पृष्ठभूमि संगीत ऊर्जावान Beats वा आराम प्रकृति ध्वनि हुन सक्छ. पाँच विभिन्न जनावर को रील मा प्रतीक हो. यी crocodiles छन्, भालू, cobras, हात्ती, र टाइगर्स. उच्चतम मूल्य प्रतीक दिनेछु जो बाघ छ 150 एक payline मा पाँच लागि सिक्का. कम तिर्ने प्रतीक बोटहरू ढाकेका छन् बजाना कार्ड एक, K, Q, जे, and 10.
अन्य सुविधाहरू समावेश:
प्रतीक विस्तार- को स्क्याटर बाहेक खेल मा हरेक प्रतीक पुतलीहरु द्वारा चिनो लगाइएको छ. पुतली चिनो लगाइएको कुनै पनि प्रतीक एक विजेता कम्बो को भाग हो भने, प्रतीकको सम्पूर्ण रील भर्न फैलाउन हुनेछ.
पुतली बुस्ट- यो सुविधा आधार खेलमा अनियमित संकेत गर्न सकिन्छ. पुतलीहरु को रील बारेमा हलचल र फैलाउन कि विजेता स्पिन छन् एक पाँच प्रतीक.
Free Spins- आधार खेल मा कहीं देखापर्ने तीन वा बढी फूल प्रतीक यो सुविधा ट्रिगर हुनेछ. तपाईं पनि जित्न सक्छौं 15 times your stake bonus if you land four scatters. But, तपाईं पाँच छरिन्छ भूमि यदि, you are awarded 50 पटक आफ्नो खम्बा बोनस. तपाईंले एकपटक यो सुविधा ट्रिगर छन्, तपाईं खेल्न प्राप्त 1,024 जीत तरिका. त्यसपछि तपाईँ पाँच पशु प्रतीक को कुनै पनि चयन गर्न आवश्यक. तपाईं चयन कि पशु मात्र उच्च मूल्य रील मा निःशुल्क spins समयमा प्रतीक हुनेछ. पाँच पशु मुक्त spins को एक विशिष्ट नम्बर र कुनै थप निःशुल्क spins संग आउन retriggered गर्न सकिन्छ.
बाघ चार मुक्त spins दिन्छ
हात्ती आठ मुक्त spins दिन्छ
भालु बाह्र मुक्त spins दिन्छ
गोही सोह्र मुक्त spins दिन्छ
कोबरा बीस मुक्त spins दिन्छ
जंगल आत्मा: जंगली को कल उच्च विचरण खेल एक मध्यम छ. यो mobileslots ठूलो बोनस सुविधाहरू आउँछ र अचम्मको देखिन्छ.